Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffameen wal qabatee namoonni 180 ol qabamuu gabaafame - NuuralHudaa
Ityoophiyaan Meeshaa Waraanaa Faransaay irraa bituuf gaafii dhiheessuun gabaafame
Mannii Murtii Idil-Addunyaa Waraana Briteen irratti qorannoo yakkaa gaggeessuuf ta’uu beeksise
Masjida Annasr Kan Magaalaa Adaamaatti Sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame
ADWUI’n bu’aa qorannoo adeemsa addicha walitti makuu sagalee caalmaan raggaasise
Obbo Jawaar Muhammad Filannoo Biyyooleessa bara 2012 irratti dorgomuuf qophii tahuu ifoomse
Mootummaan Yunivarsitiiwwan gara tasgabiitti hin deebine irratti tarkaanfii hanga cufuutti gahu kan fudhatu tahuu ibsame
Mootummaan Kuweeyt aangoo gadi lakkisuuf tahuu gabaafame
Home/Odeeyfannoo/Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffameen wal qabatee namoonni 180 ol qabamuu gabaafame
Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffameen wal qabatee namoonni 180 ol qabamuu gabaafame
Hogganaan yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa keessatti geggeeffamee jeneraal Asaaminaw Tsiggee guyyaa kaleessaa humnoota tikaatiin ajjeefamuun ni yaadatama. Yaalii fonqolchaa kana hordofuun namoonni heddu too’annaa jala kan olfamaa jiran tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Hogganaan poolisii naannoo Amaaraa Obbo Abbare Addaamuu AP’f akka himatti, qondaaltota naannichaa ol’aanoo 4 fi namoonni fonqolcha kana keessatti hirmaatuun shakkaman kanneen biroo 178 hidhamanii jiru jedhe.
Haaluma wal fakkaatuun yaalii fonqolchaa kanaan wal qabatee Finfinnee fi naannawa isii keessatti namoonni heddu too’annaa jala kan oolfamaa jiran tahuun beekamee jira.
Gama birootiin ammoo yaalii fonqolchaa mootummaa fi ajjeechaa qondaaltota irratti raawwatame kana Ameerikaa fi Gamtaa Awrooppaa dabalatee biyyoonni heddu balaaleffataa jiran. Bulchiinsa Traamp keessatti itti aanaan itti gaaftamaa dhimma Afrikaa Tabor Nagy dhimmicha irratti ibsa kenneen, “Ameerikaan ajjeechaa fi yaalii fonqolchaa Ityoophiyaa keessatti raawwatame kana cimsitee ni balaaleffatti, yaaliin kun dandeettii hoggansa cimaa Dr. Abiyiitiin osoo fashalaayuu dhabaatee kana daran badii guddaa dhaqqabsiisuu mala” jedhe. Itti dabaluudhaanis, Ameerikaan bulchiinsa Dr. Abiy Ahmad gama hundaan kan deeggartu tahuu beeksise.
Ityoophiyaa Naannoo Amaaraa